पारसले भने ‘हाम्रो सम्बन्ध भगवान जाने’ - " सुलभ खबर "
पारसले भने ‘हाम्रो सम्बन्ध भगवान जाने’
काठमाडौं । एक जमानामा कपालको चुल्ठो बाटेर होटल- होटलमा मान्छे कुट्दै हिँड्ने पूर्वयुवराज पारस शाहको ह’त्कडी लगाएको तस्वीर प्रकाशित हुँदा धेरैले उनी पारस नै हुन् भनेर पत्याएनन् । झट्ट हेर्दा अफ्रिकातिरको जस्तो देखिने पारसको सकलले धेरैलाई झु’क्यायो, के उनी पारस नै हुन् त ? कतिपयले त यो पारसको तस्वीरै होइन भन्ने दाबीसमेत गरे ।
ह’त्कडीसहितको तस्वीर प्रकाशित हुँदा पनि धेरैलाई पारस शाहको यस्तो हालतबारे पत्यार लागेन । तर, वास्तविकता कसैले नस्वीकारे पनि वास्तविकता नै थियो । पूर्व युवराज पारसलाई यो हालतमा देखेर कतिपयलाई दुख लाग्यो होला, कतिपयलाई रमाइलो पनि लागेको जस्तो देखियो । पूर्वराजा, पूर्वरानी कोमल, औपचारिक पत्नी हिमानी र छोराछोरीले कसरी हेरे होलान् पारसको यस्तो तस्वीर ?
मान्छेमा जति पनि रौनक, ओज वा आउँछ, त्यसमा सत्ताको निर्णायक हात हुँदोरहेछ भन्ने कुरा हिजोका युवराज पारस र आजका गँ’ज’डी पारसले स्पष्ट भेद छुट्याइदिएको थियो । पारस शाहको हालत यस्तो हुनुमा कसको दोष होला ? यो प्रश्नमा कतिपयले निर्मल निवासलाई अर्थात पारसका पितालाई दोष दिन खोजेका छन् । तर, वास्तविकता भन्ने हो भने पारसको यो नियति हुनुमा अरु कसैको नभएर उनको आफ्नै दोष छ ।
विगतमा पनि यिनै कुनै गतिलो चरित्रका मान्छे होइनन् । ज्ञानेन्द्रले उनलाई युवराजधिराज घोषणा गर्दाखेरि नै जनताले व्यापक विरोध गरेकै थिए । खान नपाएर हजारौं नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकमा र’गत र प’सीना ब’गाइरहेका बेला पारसचाँहि धेर खा’न पाएर मा’त्ति’एर गँ’ज’डी ब’नेका हुन् ।
गरीबहरुलाई जीवनबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन तर, शहरमा बस्ने प्रायः सम्भ्रान्त वर्गका युवाहरु ला’गू’ औ’ष’ध’को कु’ल’त’मा लाग्ने गरेका छन् । यही कु’ल’तको प्रतिनिधि वर्ग र पात्र हुन् पारस शाह । उनी गु’ण्डा’गर्दी ग’र्ने गँ’ज’डीहरुका युवराज नै हुन् । च’री’भन्दा कम होइनन् उनी । रुबेल चौधरीमाथि कुनै चरीले चितवनमा गो ‘ली च’ला’एको’ भ’ए पारसले जस्तो छुट पाउने थिएन । त्यसैले पारस बिग्रिनुमा अरु कसैको कमजोरी नभएर उनको आफ्नै देखिन्छ ।
पारसको विषयमा कुरा गर्दा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पनि सान्दर्भिक बनेर आउँछ । कमल थापा लगायतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने जुन कुरा गरेका छन्, त्यसरी राजतन्त्र फर्कियो भने पारस उनीहरुका ‘सम्भावित राजा’ हुन् ।
ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, अझ पारसको शरीर हेर्दा पिताको भन्दा धेरै खराब छ । आफूलाई यस्तै अवस्थामा राख्ने हो भने पारसको आयु खासै लामो जाने देखिन्न । तर, पारसले आफूलाई कुलतबाट मुक्त राख्ने सम्भावना पनि छैन ।
पूर्वराजावादीहरुलाई ‘राजा’ को संकट पर्न थालेको छ । हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउन अझै १६/१७ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर, त्यसबेलासम्म उनी राजा हुन्छु भन्ने संस्कारमा हुर्कने सम्भावना देखिन्न । त्यसैले पारसको दयनीय अनुहारले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरुलाई कुरी कुरी गरिरहेको छ । कसलाई बनाउने राजा ? त्रानेन्द्रपछि कसलाई बनाउने ? पारसलाई ? उनका सकल हेर्दा राजा हुने जस्तो देखिन्छ र ? देखिँदैन ।
पारस शाह जति नै उ’द्दण्ड भए पनि उनकी पत्नी हिमानी इमान्दार मानिन्छन् । तर, यतिबेला उनको र पारसको औपचारिक सम्बन्ध छुटिसकेको छ । पारसको बिगँदो हालत वा सप्रँदो, दुबै अवस्थामा पनि हिमानीले उनीबाट सुखानुभूति गर्न पाएकी छैनन् ।
नेपालीहरु विश्वमा इमान्दार नागरिकका रुपमा चिनिन्छन् । तर, देशमा बस्दा पनि सबैलाई दुःख दिइरहने पारसले बैंककमा बसेर नेपाल र नेपालीको पहिचान धमिलो बनाए । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि मायालाग्दो हुलियामा देखिन्थे उनी । नेपाल बसाइका क्रममा उनको उ’द’ण्ड व्यवहार ठप्पै रोकिएको थियो । उनी कहिले परिवारसँग रेस्टुराँमा देखिन थालेका थिए भने कहिले मन्दिर र आश्रममा । थाइल्यान्ड बसाइका क्रममा चलेको अफेयर्सको प्रभावले श्र्रीमती हिमानी शाहसँग उनको सम्बन्ध सुध्रन सकेन । छोराछोरीसँग घुम्न निस्किएको तस्बिरले उनमा अभिभावकको दायित्वबोध भएको देखिन्थ्यो ।
तर उनको यो छवि लामो समय टिक्न सकेन । केहि समय अघिको घटनाले शाहज्यादाबाट युवराज हुँदै पूर्वयुवराज भएका पारस वीर विक्रम शाहमा चौवन्न ठक्कर त्रिपन्न घुस्सापछि पनि कुनै परिवर्तन हुन नसकेको र उस्तै उ’दण्ड रहेको देखायो ।
सार्वजनिक भएको घटना सामान्य नै हो तर लुकाएको पाटो भने निक्कै ग’म्भीर छ । दिउँसो बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै जाउलाखेलबाट हुइँकिएपछि सम्भावित दुर्घटना रोक्न ट्राफिक प्रहरीले उनले चलाएको गाडी नियन्त्रणमा लिएर पाँच सय जरिवाना तिराएको थियो ।
अनियन्त्रित रुपमा चलाएको गाडी ट्राफिकले जाउलाखेलमै नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनले अटेर गरे । गाडी हु’त्तिदै थापाथली आइपुग्दा ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएर ब्लुबुक र लाइसेन्स नियन्त्रणमा लियो र पाँच सयको चिट का’ट्यो । सार्वजनिक भएको घटना विवरण यत्ति हो ।
पारसको गाडी नियन्त्रणमा लिएर चिट का’ट्ने ट्राफिक प्रहरीको खोजीका क्रममा खुल्यो, त्यस दिनको अर्को ग’म्भीर पाटो । जसले बाहिर आएझैँ सो दिन पारसले ट्राफिक नियम उल्लंघन मात्र नगरेको बरु ह ‘त्या प्र’या’सै गरेको पोल खुल्यो । पारसको स’न्काहापनले १८ वर्ष अगाडिको प्रवीण गुरुङ का’ण्ड दोहोरिँदै थियो थापाथलीमा । सावधानी नअपनाएको भए पारसको झोँ’कको दोस्रो सिकार हुन्थिन्, थापाथलीमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जवान सुष्मा चौधरी ।
निर्देशनअनुसार गाडी रोकेर चौधरीले कागजपत्र माग्दासम्मको अवस्था सामान्य नै थियो । जब उनले कागजपत्र लिएर अलि पर पुगिन्, पारसले उनीतिरै ताकेर स्पिडमा गाडी चलाए । आइल्यान्ड पार गरिसकेकाले उनलाई गाडीले भेटेन र मात्र उनी जोगिइन् ।
‘चालकको नामको ठाउँमा पारस वीर विक्रम शाहदेव लेखेको पढ्नासाथ एकछिन त के गर्ने के गर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘चालक गाडीभित्र रिसले आगो भइसकेका थिए । गाडीभित्रै स्टेयरिङ नजिकै हातले जोडजोडले हानिरहेका थिए ।’
चौधरीले शुक्रबारलाई त्यो दिनको दृश्य सुनाइन्, ‘एकछिन टाइम लाग्छ है, म माथि सोध्छु भनेर अलि पर गएँ । कुपन्डोल जाने साइडतिरको गाडी छोडेपछि पारसको गाडी स्पिडमा हामी भएतिर आयो । गाडी आएको स्पिड देख्दा त ‘लौ हान्यो !’ भन्ने लागेको थियो तर आइल्यान्डमाथि बसेकाले धन्न लागेन । मेरो डकुमेन्ट घरमा पुर्याउन आइज’ भन्दै उनले गाडी माइतीघरतर्फ हुइँक्याए ।’
दुई वर्षदेखि थापाथलीमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिँदाको अनुभवले कहाँ बस्दा सुरक्षित होइन्छ भन्ने जानकार थिइन् चौधरी र जोगिइन् तर १८ वर्षअगाडि उनै पारसको सन्काहापनले एक गायक तथा संगीतकारको ज्यान गएको थियो, ठाउँका ठाउँ सडकमा ।
घटना २०५७ साउन २२ को हो । पारसले चलाएको गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चलाइरहेका गायक तथा संगीतकार प्रवीण गुरुङ मा’रिएका थिए । शक्तिमा रहेको दरबारले त्यसबेला नक्कली चालक खडा गरेर उनलाई जोगाएको थियो ।
घटनाको दिन दरबारको दक्षिणी ढोकामा ल्यान्डक्रुजर गाडीले गुरुङ चढेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर केसरमहल, लाजिम्पाट, पानीपोखरी हुँदै निर्मल निवास छिरेको थियो । गाडी नम्बरका आधारमा प्रहरीले खोज्दा गाडी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको रहेको खुल्यो । दरबारको सोधखोजमा गाडी पारसले चलाएको देखियो ।
तात्कालीन नेकपा एमालेको युवा संगठनले पारसको शाहज्यादा पदवी खोस्न र कारबाही गर्न पाँच लाखको हस्ताक्षर बुझाए पनि चालकको रुपमा खड्गबहादुर भुजेलको नाम सार्वजनिक भयो । बदमासी पारसले गरेको पक्कापक्की भए पनि केस त्यत्तिकै सेलायो । यो घटनाका बेला नारायणहिटी दरबारमा कार्यरत शाही पाश्र्ववर्ती विवेककुमार शाहले पुस्तकमार्फत् सो घटना गराउने पारसै भएको पुष्टि गरिदिए ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमार्फत् ।
पुस्तकमा उनले लेखेका छन् :
प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘दरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि आइतबार राति भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक गायक प्रवीण गुरुङको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । दुर्घटनापश्चात् मोटर नरोकिई तेज गतिमा भा’गेर निर्मल निवासमा छि¥यो । उहाँले ल्यान्डक्रुजर मोटरको नम्बरसमेत दिनुभयो । तत्कालै महाराजाधिराजमा यो कुरा जाहेर गरेँ । सरकारबाट ‘माइला भाइ (अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र) लाई फोन गरेर तुरुन्त बुझ’ हुकुम भयो । ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फोन गरेँ । सरकारलाई पनि यसबारे केही जानकारी रहेनछ । ‘म बुझेर खबर गर्छु’ हुकुम भयो । आधा घन्टापछि ज्ञानेन्द्र सरकारले फोन गरेर हुकुम भयो, ‘विवेक, यस इट् इज हिम, त्यो मोटर पनि हो र पारसले चलाएको रहेछ, अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, उपाय निकाल ।’
१८ वर्षको अवधिमा शक्ति सन्तुलन परिर्वतन भइसक्यो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । दरबार का’ण्डसँगै शाहज्यादाबाट युवराज भएका पारस पूर्वयुवराज भइसके । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणत भइसक्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाह, गद्दीच्युत हुँदै निर्मल निवास पुगे । तर पारस उस्तै देखिए, उदण्ड र सन्काहा अनि व्यवहार गर्न नजान्ने घमण्डी व्यक्ति ।
पारसको वि’वादको श्रृंखला लामै छ । शाहज्यादा हुँदादेखि सुरु भएको उनको वि’वा’दको यात्रा पूर्व युवराज हुँदासम्म रोकिएको छैन । कुलतबाट निकाल्न सुधार केन्द्रमा बसे पनि उनमा सुधार देखिएको छैन । ग’म्भीर बिरामी भएसँगै एक महिना लामो अस्पताल बसाइपछि उनले दोस्रो जन्म पाए तर उनको ‘ब्याड ब्वाई’को व्यवहारमा सुधार आएको बिल्कुलै देखिएको छैन ।
तात्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशै नास हुनेगरी भएको दरबार का’ण्डमा बाबु ज्ञानेन्द्र शाहसँगै उनी पनि आशंकामा तानिएका थिए । घटनाको ग’म्भीर अनुसन्धान नहुँदा न उनको संलग्नता खुल्यो न आशंका नै हट्यो ।
गणतन्त्र घोषणापछि पनि उनको उदण्डताको क्रम जारी नै रह्यो । २०६७ फागुन २८ मा चितवनको टाइगर टप्स रिसोर्टमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका बंगलादेशी ज्वाइँ रुबेल चौधरीसँग उनको जम्का भेट हुँदा गो ‘ली नै च’लाए । घटनापछि पोखराको फूलबारी रिसोर्टमा आएर बसेका पारसलाई प्रहरीले होटलबाटै नियन्त्रणमा लिएर हेलिकप्टरमा चितवन लगेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक अ’परा’ध अभियोग लागे पनि ‘आइन्दा यस्तो नगर्ने’ सर्तमा रिहा भएका थिए ।
२०६८ जेठमा उनले बहिनीसँगको सम्बन्धलाई लिएर ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई कु ट पि ट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । २०६६ भदौमा उनी जाली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा जोडिए । भारत मध्य प्रदेशबाट नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित नेपाली नागरिक अतिक मोहम्मद र भारतीय राजेश गुप्ता पक्राउ परेपछि भारतीय मिडियाले जा ली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा पारसको नामसमेत जोडेका थिए । बैंककमै रहँदा उनले आफू असुरक्षित रहेको भन्दै त्यहाँको नेपाली दूतावासमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
यता बस्ने वातावरण नभएपछि ०६७ भदौ ११ मा सिंगापुर हुँदै थाइल्यान्ड पुगे पनि उनको उदण्डता र विवाद रोकिएन । चार पटक लागूऔषधसहित पक्राउ परे उनी । हृदयाघात भएर कोमामा पुगेपछि अस्पतालमा एक महिनाको उपचारपछि बौरिए र नेपाल फर्किए ।
थाइल्यान्डमा थाई युवती कन्निका चाइसानसँगको सम्बन्धले समेत उनी विवादमा छाएका थिए । पारस–कन्निका सम्बन्धको खुलासापछि नेपालमा रहेको परिवारसँगको उनको सम्बन्ध चिसिएको थियो । उनी नेपाल फर्किएपछि पनि कन्निकाले पछ्याउन भने छाडेकी छैनन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा दुवैको अन्तरंग तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।
पारिवारिक जमघटमा पहिला त्यत्ति धेरै नदेखिने पारस पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र, कोमलसँगको पारिवारिक जमघटमा सँगै देखिने गरेका छ थिए । क्लबहरुमा छोराछोरीसहित पुग्ने गरेका थिए । लामो समयदेखि पारस र हिमानी सँगै देखिएका थिएनन् ।
पूर्व राजकुमार पारस शाह र मोडल सोनीका रोकायाको जोडीको बारेमा धेरै थरिका गसिपहरु सामाजिक संजालमा आजकल चल्ने गरेका छन् । जब पारस शाह सोनीकाको क्लबको उदघाटनमा पुगे, यी दुई बिचको गसिप बन्न थाल्यो र जब पारसले सोनीकालाई लिएर मनाङ्ग सम्म घुम्न पुगे, धेरैले आ-आफ्नो तरिकाको अनुमान लाउन थाले ।
पारस शाहको पैसाको लागि सोनीका पछि लागेकी देखि सोनीकाले गर्दा पारस शाहले श्रीमती हिमानी शाहसंग डिभोर्स सम्म गर्ने हल्ला समेत सामाजिक संजालमा चल्न थाले । अहिले सामाजिक संजालमा पारस शाह र सोनीकाको लभ अफेयर चलिरहेको छ भन्ने गसिप चलिरहेको छ । यहि विषयमा पारसले भनेका पनि थिए कि ‘हाम्रो सम्बन्ध भगवान जाने’ ।
अघिल्लो बर्षको सुरुआततिर गोरखामा हिमानी ट्रष्टले बनाएको विद्यालयको भवन उद्घाटनका क्रममा पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह आमने सामने थिए । पूर्ववडामहारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहले उद्घाटन गरेको नयाँ भवनको औपचारिक कार्यक्रममा पति पत्नीको जम्काभेट भएको थियो । लोकलाई देखाउनका लागि उनीहरूबीच साधारण संवाद भयो त्यो त्यसअघिको एक दशक र त्यसपछि हालसम्मका लागि दुर्लभ दृश्य थियो ।
राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र घोषणा हुनासाथ पारस प्रेमिका कन्निकासँग थाइल्यान्डमा लामो समय बसे । सोही बेलादेखि पारस–हिमानीको सम्बन्धमा खटपट देखिएको थियो । ‘आम नेपाली नारीजस्तै राजपरिवारको भए पनि पुर्वयुवराज्ञीलाई ति विविध घटनाक्रमले केही नमिठो बनाएको थियो । हालसम्म पनि यो क्रम चलिरहेको छ, जसले सम्बन्धमा सुधार आउला भन्ने देखिँदैन’, निर्मलनिवास स्रोतले भन्यो,‘आजभोलीका समाचार, तस्बिर र घटनाक्रमले पनि त्यहि देखाउँछ ।’ थाइल्यान्डमा लागुऔषध प्रयोग गरेको अभियोगमा पारसलाई त्यहाँको प्रहरीले हिरासतमा राखेपछि छुटाउनका लागि हिमानी पुगेकी थिइन् । उनले पारसलाई रिहा गराए पनि सँगै बसिनन् र सँगै काठमाडांै पनि फर्किनन् ।
‘त्यसबेला देखिएको त्यो परिदृश्य नै सम्बन्धमा नजिक नभएको भन्ने स्पष्ट चित्र थियो’, हिमानी नजिक रहेर काम गरिरहेकी एक जना महिला भन्छिन्,‘उहाँ (हिमानी) त्यसपछि सामाजिक काममा सक्रिय हुनुभयो र हिमानी ट्रष्टमार्फत अलग बाटो समात्नुभयो ।’पारस–हिमानी नजिक नहुनुको एउटा तर महत्वपूर्ण कारणचाहिँ धार्मिक अन्धविश्वास पनि रहेको बताइएको छ । धार्मिक माताको नाममा काम गरिरहेकी सविता नामकी महिलाले हिमानीलाई केही बर्षसम्म पारससँग बस्न नहुने सुझाव दिएकी थिइन् । सोही सुझावले नेपालमा रहँदा पनि पारसको निर्मलनिवास प्रवेशमा ब्रेक लगायो ।
झन्डै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पारस–हिमानीको भौतिक सम्बन्ध नभएको देखिन्छ । भावनात्मक सम्बन्धमा पनि चढाव छैन बरु उतार मात्रै छ । केही बर्षदेखि पारस नेपालमै भए पनि हिमानीसँग नजिक हुने अवसर पाएका छैनन् । एक हिसाबले उनलाई निर्मलनिवासमा हिमानी भएका बखत प्रवेशमा निषेध छ । निर्मलनिवास स्रोत भन्छ,‘राजतन्त्रको अवसान भएका दिनदेखि नै पारसको पारिवारिक जीवन पनि परिवर्तन भयो । एक हिसाबले झन्डै डेढ दशकदेखि उनी पत्नी हिमानीसँग भावना, संवेदना, प्रेम र भावुकतासँग रुमल्लिन पाएका छैनन्, यो उनकै कारणले निम्तिएको नियती हो । त्यसैले बाहिर अफेयरका कुरा आइरहेका छन् ।’हिमानीसँग नजिक हुन नपाएका पारस पछिल्लो समय भने विवादीत युट्युवर सोनिका रोकायासँग अफेयरमा रहेका पर्याप्त कारण र उदाहरण छन् । दरबारमार्गको एउटा रेष्टुरेन्ट उद्घाटन गरेका पारसको रोकायासँगको आलिंगनको तस्बिर बाहिरियो । अफेयरका चर्चा चल्न थाले ।
यस विषयलाई थामथुम गराउने कोशीश गरिए पनि पारस–रोकायाको सम्बन्धको पारो चढिरहेकोचाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पदेखि पोखराको लामो बसाईसम्मका विवरणले छताछुल्ल बनायो । नेपालमै बसेका तर परिवार र पत्नीसँग नजिक हुन नपाएका पारस छोराछोरीसँग भने अधिक सामिप्यमा छन् । हिमानी नपुगे पनि पारसको गएको जन्मदिनमा दुई छोरी र एक छोरा पोखरामा पुगेका थिए ।
केहि समय अगाडी हिमानीसँग टाढा र रोकायासँग गाढा प्रेममा पारस रहेको खुलासा आलिंगनमा बाँधिएका तस्बिर र भिडियोले सनसनी बनाएको थियो भने सोनिकाको जन्मदिनको अवसर पारेर उपहारमा दिइएको हिराको हार पनि चर्चामा थियो । ‘कुनै आम मानिस, साथी वा सहयोगीका लागि उपहार दिने तरिका, उनीसँगको सम्बन्धलाई देखाउने तरिका नै फरक हुन्छ । तर, पारसले नीजि प्रेमिकाका हिसाबले नै सोनिकासँग गरिएका व्यवाहारलाई बाहिर ल्याइरहेका छन्’, स्रोतले भन्यो,‘यसले उनको बाहिरी अफेयरलाई प्रष्ट बनाएको मात्र छैन, पत्नीसँग सम्बन्ध सुधार छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।’
ओच्छ्यानमा राखिएको मोबाइल पड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृ,त्यु